Testosterone supplements kanye Anabolic steroid androgenic (Aas) kungabangela isifo senhliziyo, izinguquko ekuziphatheni ukungazali uma busetshenziswa ngokweqile.
Esikhathini esingeside esidlule, US Agency for Food and Drug Administration ishilo ukuthi wabhala zonke testosterone amaphilisi kadokotela ukuthi uvunyelwe ekwelapheni amadoda nge amazinga aphansi le hormone ngokuqondene ezifweni ezithile, izobuyekezwa.
Izigidi zabantu manje usebenzisa amaphilisi, si noma wamukele testosterone imijovo ethembeni zokuqinisa impilo engokomzimba libido anda.
Ukuphuza ama-steroid zokwenziwa testosterone kanye ukuhluka asetshenziselwa izinkinga ekwelapheni ezifana ukubambezeleka zokuthomba, kanye nezifo ukuthi ukubangela ukulahleka yemisipha (isib umdlavuza noma ingculaza).
Yini ebangela ukuhlukunyezwa izithasiselo
Kodwa abadala nentsha, kufaka umsubathi bodybuilders, ngokuvamile ezimathonsi ukuthatha testosterone nezinye Aas. Ukuhlukunyezwa testosterone at ngemithamo ephakeme kunalokho okwakucatshangwa enqunywe udokotela wakho, futhi ngokuvamile ngokuhlanganyela nezinye Aas, kuyinto ezempilo ingozi engathi sína, njengoba lezi izithasiselo ezithinta inhliziyo, ubuchopho, isibindi, impilo yengqondo, kanye uhlelo endocrine.
imiphumela emibi yokweqisa zihlanganisa ukwehluleka nokumelwa yinhliziyo, ukufa uhlangothi, isifo sokucindezeleka, ubutha, ubudlova, isibindi ubuthi kanye nenzalo wesilisa. Abesilisa labahlukumeta ne ebulilini testosterone, futhi libike izinkinga ezifana ne ukuqedwa lezi izithasiselo, efana ukudana, ukukhathala, ukucasuka, ukungakuthandi ukudla, kwehle libido nokuqwasha.
Amavithamini "Velma": incazelo, ukubuyekezwa kwesicelo. Amavithamini "Velma" ngoba amadoda
"Spirulina Val": ukubuyekezwa odokotela. "Spirulina Val" ukunciphisa umzimba: indlela yokwenza
Multivitamin Iningi ne izakhi mkhondo
Ascorbic acid yilokhu okudingekayo? amaphilisi ascorbic acid
Youth subculture: rappers
Itiye Thai: izakhiwo ezuzisayo kanye nokubuyekeza
Izinkanyezi omele womndeni Hloya Kardashyan: Biography, ukubukeka empilweni yakho